Disclaimer – REDPlayer
ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ game တွေနဲ့ အရေးအသားမှာပါတဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေက RED Player ကပိုင်ဆိုင်တာ တစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းပါးတစ်ချို့ကတော့ အားစိုက်ထုတ်ပြီး ရေးထားတာရယ်၊ ဘာသာပြန်ပေးထားတာတွေကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ ဆိုင်ရာ game တွေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ မသိသလို စီးပွားရေးအရလည်း ဘာဆက်နွယ်မှုမှမရှိပါဘူး။
Copy right ကိစ္စကတော့ ပိုင်တဲ့ သူတွေ နဲ့သာသက်ဆိုင်ပါကြောင်းနဲ့။ ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ content ထဲက အချက်အလက်တွေ အားလုံးဟာ မူရင်းကတဆင့် ရေးသား ဖော်ပြတာဖြစ်ရင် credit နဲ့ source ကိုဖော်ပြပြီးတော့၊ News,review နဲ့ Guide တွေမှာတော့ သက်ဆိုင်ရာရဲ့ အာဘော်မဟုတ်တော့ပဲ ဘေးကနေတွေ့တဲ့ အမြင်အတိုင်း (ထိခိုက်နစ်နာစေလိုခြင်းအလျဉ်းမရှိပဲ) RED Player editor အဖွဲ့ကရေးသားတာသာ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ အချက်အလက်မှားယွင်းဖော်ပြတာ၊ တားမြစ်ချက်၊ ဒါမှမဟုတ် လိုအပ်တာရှိရင် admin@redplayer.zone ဒါမှမဟုတ် daddyredplayer@gmail.com ကို ဆက်သွယ်နိုင် ကြောင်းပါ။
Review တွေမှာ မရေးစေချင်ရင်လည်း သတင်းတွေဖွ၊ comment မှာရန်လာမတွေ့ပဲ ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောပါလို့။ ကိုယ်လည်းမပိုင်၊ ပိုင်ရှင်ဆိုသူလည်းမကြိုက်တဲ့ ကိစ္စ ဒီနေရာက ဝေဖန်ဖို့မရှိပါဘူး။ PEACE!!
Due to the social nature of this pages, may contain content copyrighted by another entity or person. RED Player claims no copyright to said content. We only wish to know and share of gaming information within our community.
If you haveacomplaint about something or find your content is being used incorrectly, please contact us. We would’ve never done any harm, knowingly.